Ukukhanyiswa - Kuthetha ukuthini i-masturbation kunye nokwenza njani?
Njani ukugcoba ngamabhinqa?
Ngokomgaqo, inqaku elibalulekileyo le-masturbation kukuba lendalo ngokupheleleyo. Ukuhlaziya i-indastri nokuba kukhoyo kwizilwanyana zezilwanyana, ngoko ke akuyi into yokuba neentloni. Ukongezelela, umntu ngamnye uqobo, oko kukuthi, akukho iresiphi yazo zonke.
Kuthetha ukuthini ngamathambo?
Ngoko ke, yonke into ibalulekile ekuzinelisekeni, okwenza ufumane inzuzo yolwazi, ngaphandle kokubandakanyeka. Oku kuya kuphunyezwa ngokusebenzisa izandla okanye ezinye izinto zesini, ezixhaswa ziingcamango zengqondo, iincwadi, imifanekiso okanye iifilimu.
Ukuxhatshazwa ngokobugqwetha kufezekisa injongo ebalulekileyo ekuphuhlisweni kwayo, ngakumbi kubantwana abaselula: Ngokuhlola umnqweno womntu, bahlakulela ubudlelwane obuhle kunye nomzimba wabo ngexesha lokutshatyalaliswa kwentshukumo baze bafunde ukuba zeziphi iimfuno zesondo. Ukongeza, kwi-masturbation, kunye ngexesha lokwabelana ngesondo, i-hormone yolonwabo iyakhululwa, ukwenzela ukuba inokukunceda ukunciphisa uxinzelelo.
Ukuhlaziya umzimba ngamadoda kulula. Kwindoda eninzi, kwanele ukuvuselela i-penis ukuba ifinyelele kwincinci. Ngalo njongo, i-shaft ihlanganiswe ngesandla esisodwa, amandla okubamba ixhomekeka ngokupheleleyo kwizinto ozikhethayo, kwaye ukulungelelanisa nokunyusa ukunyanzela kuqinisekisa ukunyaniseka okulungileyo.
Ukugcoba kwindoda kumntu
Okubalulekileyo apha kukusetyenziswa kwe-lubricant efanelekileyo ukuphepha ukukhathazeka. Ubungakanani kunye nethempo kunganyuswa ngokukhawuleza, okanye ngokuphindaphindiweyo ngokuphindaphindiweyo.
Nangona kunjalo, kukho okubizwa ngokuba yi-masturbator kumadoda, athatyathwa kwi-vaginal real. Ngamanye amaxesha iiplanga zeerobha zivakalelwa ngakumbi, ngamanye amaxesha zingaphantsi kokufana nokuphila, kwaye ngamanye amaxesha zixhaswa ngeemfumba ukuze zivuselele okanye zidibanise iiyunithi ezincinci.
Ngokuqinisekileyo, amadoda angaphinda adlulise umxhelo wabo: Iipenisi ezikhethekileyo zithintela igazi ukuba lingadluli kwimizimba ye-erectile emva kwesigxina. Ulungiso luhlala lujikelezo lwesibini.
Kucebise ukuba uhlale ulungele umkhonto, emva koko, awuyi kuphelela kwisitya sokuhlambela emva kokuvuthwa. Ezinye iindlela ezivela kumaphephandaba, umzekelo ukusetyenziswa kweepee okanye ipayipi yokucoca i-vacuum, ayilunconywanga ngezizathu zokucoceka ngendlela. Ukuba ufuna ukubandakanya izinto, kufuneka usebenzise kuphela i-sextoys ezifanelekileyo, kuba kuphela esi siqinisekiso sokuba akukho zingozi zezempilo ezivela. Emva kokusetyenziswa, ezi zixhobo kufuneka zihlambuluke ngokufanelekileyo.
Izithembiso ezizodwa zokuthembiswa kwamadoda ekuvuseleleni i-P-indawo, iisentimitha ezimbalwa ngaphakathi ngaphakathi kwindonga yangaphambili ye-anus. Amanye amadoda angakwazi ukufumana ngokuzenzekelayo ngolu hlobo ngaphandle kokuchukumisa ipenis i-orgasm enkulu-apha, kufuneka ufune ukuzama. Nangona kunjalo, nasi indlela efanelekileyo yokulumkisa, kuba i-anus kufuneka isetyenziswe kuqala kwiyeza ezingavamile. Ukuhlangabezana neP-point ngokugqibeleleyo, kukho iityshi ezenziwe ngaphambili, ngamanye amaxesha kunye neeyunithi zokuzula.
Ukudibanisa okukhethekileyo kunika i-masturbation empilweni yamadoda: Ukunyuka kwexesha eliqhelekileyo, nokuba ngumntu wokuhlambalaza okanye ukulala naye, kuthintela iingxaki zeprothende zexesha elizayo.
Kubafazi, i-masturbation iyinkimbinkimbi ngakumbi, kuba kungekhona onke amabhinqa athathe ngokukhawuleza athathe into ethile. Ngokuqhelekileyo i-massage ecocekileyo yendawo ye-pubic ayanele. Kucetyiswa ukuba kukhuthazwe i-clitoris kunye nesisini ngexesha elifanayo ukuzonwabisa okukhulu-kwaye, ukuba kunokwenzeka, iG-spot nayo nayo.
Oku kukhoneni lwangaphakathi lwangaphakathi lomfazi. Uyakwazi ukufikelela ngomnwe wakhe, kodwa kulula ngakumbi kwizondo zobulili ezizodwa. Ngokufanelekileyo, ezi zinto kufuneka zidibanise, ngoko kubasetyhini kwi-masturbation kuninzi kakhulu.
Njengomgaqo oqhelekileyo, ubukhulu kunye nejubane lokuthintela kufuneka linyuka kancinci. Ezinye iinkalo ezingekho phantsi kwelo bhinqa zibhetele ngokunyuka okukhulu, kwaye umnxeba wabo uziva kakuhle kuphela emva kwexeshana. Ukongezelela, abafazi baxhamle kuphela kumgangatho othile - kuba isiqalo sinokufaneleka ukuba sisebenzise iiblue.
Abasetyhini abaninzi bafumana ukuvuselelwa kwe-anus eyongezelelweyo, umzekelo, ngokusebenzisa iplagi yangaphambili, enomdla kakhulu. Oku kufuneka kukhululeke kwaye kuvivinywe ngamafutha amaninzi. Yonke into inokwenzeka, akukho nto kufuneka yenziwe. Ukuqhayisa kakhulu kunakho ukuvuselela okufanayo ngexesha lexeshana, umzekelo ngeibhonki okanye iminwe yesandla samahhala.
Kukho iindlela ezininzi zokuncedisa i-masturbation kubasetyhini. Iimpawu eziqhelekileyo ukusuka kwi-dildo elula ukuya kwi-vibrator ukuya kwizixhobo ezinzima apho abesifazana banokukhwela ngokukhawuleza ukuya kwincinci. Kwiimeko ezininzi, nangona kunjalo, izandla ezimbini okanye i-dildo okanye i-vibrator zanele.
Xa usebenzisa izandla kufuneka uqiniseke ukuba iminwe ayinayo imida esicacileyo kwaye uhlambulule izandla zakho phambi kokugcoba.
Ngokukodwa, abafazi abafumana kunzima ukufikelela kwi-orgasm ngexesha lokuxhaphaza ngokwesondo ngokuqhelekileyo ekubeni baqhelane kakuhle nemimandla yabo efanelekileyo ngexesha lokuhlaziya i-masturbation. Ngamanye amava, banokubonisa ngenyameko iqabane ngexesha lokwabelana ngesondo, yiziphi iindawo azifanele azivuselele ngendlela kwaye azilethe kwiinkqutyana.
Ukukhanya - isakhiwo kunye nomsebenzi wamabele amabhinqa